Indawo yokuHamba ethandwayo yabantu baseMelika kweli hlobo ngoku lityhiliwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Indawo yokuHamba ethandwayo yabantu baseMelika kweli hlobo ngoku lityhiliwe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Emva kweminyaka emibini elandelelanayo ephawulwe yimpembelelo yobhubhani we-Covid-19 kukhenketho, umboneleli wonxibelelwano lweselula, u-Ubigi, watyhila iindlela zokuhamba zehlabathi ngexesha lasehlotyeni.
Ngokukodwa, inika ingxelo yeendawo ezithandwa ngabakhenkethi baseMelika ngokusekwe kusetyenziso lwabo lwedatha ehlotyeni.
Olu phononongo lwamazwe ngamazwe lusekelwe kuhlalutyo lokusetyenziswa kwezicwangciso zedatha yeselula ye-eSIM ngesampulu yabasebenzisi be-10,000.
Yakhiwe ngexesha eliphakathi kukaJulayi no-Agasti 2021 ngokwelizwe labasebenzisi abahlala kulo.
Okokuqala, kwinqanaba lamazwe ngamazwe, bekukho ukunyuka okuphawulekayo kokusetyenziswa kwedatha ngexesha lehlobo, njengoko izithintelo zokuhamba zaye zasuswa kumazwe amaninzi. Umthamo wentengiso yezicwangciso zedatha uphindwe kabini ngoJulayi nango-Agasti ka-2021 xa kuthelekiswa noMeyi noJuni 2021, kwaye iphindwe kathathu (+ 246%) xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2020.
Kwinqanaba lelizwe, BaseMerika ibe ziintshatsheli ze eSIM ukwamkelwa, ukuzibeka njengabasebenzisi bokuqala bezicwangciso zedatha zombini ngaphandle nasekhaya. Kwakutheni yaye baye phi?
AMANANI ENGUNDOQO KUPHONZO lwase-UNITED STATES
Abantu baseMelika bebeziintshatsheli zokusebenzisa idatha ekuzulazuleni
• I-73% yedatha esetyenziswe ngabantu baseMelika isetyenziswe kumazwe angaphandle.
IYurophu yayiyeyona ndawo iphezulu yabakhenkethi kubantu baseMelika kweli hlobo
• I-55% yedatha esetyenzisiweyo ngabantu baseMelika ababhalisela isicwangciso sedatha yenziwa eYurophu, ityhila ukuthanda kwabo le ndawo yejografi.
• Phakathi kwamazwe aseYurophu atyelelweyo, iUnited States ithande kakhulu iFransi, nge-21% yokusetyenziswa kwayo kwedatha iyonke kweli lizwe kweli hlobo.
• Abakhenkethi baseMelika nabo baye kwezinye iindawo zaseYurophu ezifana neSpain (6%), iGrisi (6%), iGreat Britain (6%), kunye ne-Italiya (5%).
Ukusetyenziswa okubalulekileyo kwilizwe lonke kwe-eSIM ngokunjalo
• Ngelixa abantu baseMelika ubukhulu becala besebenzisa i-eSIM yabo phesheya, basebenzise izicwangciso zedatha ukuhamba ngaphakathi e-United States nge-27% yosetyenziso lwabo lwedatha lulonke ngelo xesha.